Ipeyinti Lokumaka Umgwaqo we-Thermoplastic
Ifomula eliqondile, lokuhlangana okuhle nomgwaqo, ukumakwa kwangaphambili nge-primer yenkampani yethu ezinikele (ikakhulukazi isisekelo sikakhonkolo) kuzoqinisa ukuhlangana.
2. Ukulwa nokushelela
Upende wethu unezinto ezilwa nokushibilika. Ngokwesimo sokugeleza okuhle, okokulwa nokushibilika kungaqinisekisa ukushelela okushelelayo futhi kukhulise ukuphepha kwethrafikhi.
3. Umphumela wokucabanga
Ngokwesilinganiso sokulungiswa kobuhlalu beglasi, khetha ngokufanelekile ubuhlalu obuzinzile bokukhombisa kanye nekhwalithi ephezulu yohlobo lokugqoka ingilazi enobukhulu bezinhlayiyana ezihlukile. Bahlanganise ngokulinganayo ngaphakathi kopende bese ukhipha ubuhlalu bezingilazi ezixubekile lapho kwenziwa kuzokuqinisekisa ukuthi ukumakwa okusha nokudala kuhlala kukhombisa phezulu.
4. Yomisa ngokushesha
Sebenzisa ifomula ehlukile ukukhiqiza upende ngokuya ngamazinga okushisa, umswakama nesimo somgwaqo lapho ukhipha, qinisekisa isivinini sokomisa ngokushesha nempahla yokumaka.
Khetha isilinganiso esihle kakhulu sokukhanya nokushisa kokushisa okuluhlaza, engeza izithasiselo ze-ultraviolet-proof ngasikhathi sinye, ukuze uqiniseke ukuthi umbala osebenza isikhathi eside nokucwebezela ngisho nangaphansi kwelanga elinamandla.
6. Ukuqothula izinwele oku-Anti
Ukuqhekeka kwezinwele kokumaka kuyinkinga yezobuchwepheshe embonini yezimpawu zomgwaqo ekhaya nakwamanye amazwe. Ngemuva kocwaningo lwesikhathi eside nangendlela yokwengeza ukushisa okuphezulu kokuqukethwe kwe-lipid nokugcwalisa okusebenzayo, inkampani yethu ixazulule ngokuphelele inkinga yokuqhekeka kwezinwele ngesikhathi sokwenza.
i-yo zuri squid jig
1.Product Igama: Japanese UV fluorescent squid squid jig
2.Igama lesidlaliso: ipayipi elishayo elibulala igwegwe lepayipi
I-3.Le hook iyithuluzi lomlingo lokudoba ama-squid nokuqhumisa. Kuhle futhi ukudoba olwandle olujulile futhi u-4 ulungiselele ama-squid wesikhashana njengenhlanzi.
Ukusebenza Kwezindleko Eziphakeme Nokusetha Okuhehayo Kwe-Collocation Fishing Set
Indlela Yokudoba: Ukudoba Kwasolwandle Okudoba Amanzi Amanzi
Uhlobo lweLure: Amaphakethe we-Lure Vibration / VIB Popper Ipensela Crank - I-Bass ikakhulukazi ithola ukuthola lolu hlobo lokuheha lukhanga kakhulu., IMinnow - Minnow izingibe zibukeka njengezinhlanzi futhi zigijinywa emanzini lapho zingahamba ngezindlela ezihlukile ngoba yokungazinzi ngenxa yebhibhi ngaphambili ngaphansi kwekhanda. I-Hard Bait
Indlela Yokudoba: Ukudoba Kwamanzi Amanzi, Ukudoba Olwandle
Izinto: Ipulasitiki Elukhuni
Ubukhulu beNet (cm): 1-3
Isisindo Esilungile (g): 80-100g
Lure Izesekeli Suit 5pcs Uphaphe lwegolide Nesiliva Ama-Sequins Bait ahlanganisiwe
IMinnow Hard Plastic Fishing Lure Setha Izinga Eliphezulu
Isondo lokudoba izinhlanzi ezinkulu CC isondo lokudoba elijikeleza 8000 isondo lokudoba elingcono kakhulu
1.Fishing Indlela: Sea Ukudoba
Isilinganiselo seGear: 4: 8: 1
Amasondo okudoba amasondo amakhulu okudoba ama-SH 8000 10000 12000 ajikelezayo
Indlela Yokudoba: Ukudoba Ukudoba Ukudoba Kwasolwandle Ukudoba Ukudoba Ukudoba
3.Ball Bear: 6 + 1
4.Gear kwesilinganiselo: 4.6: 1
I-Ocean Beach Fishing High Quality SW Insimbi Yamanzi Okusawoti Carp Fishing Reels Daiwa
2.Izici: Inamandla - Nikeza amandla okumisa amangalisayo. Ine-shaft eyinsimbi eqinile, igiya lokushayela elifanele. Kungcono ukhethe ama-reels ochungechunge we-2000 no-3000 uma uthanda ukudoba emanzini angenasawoti. Uma uxosha izinhlanzi ezinkulu noma izinhlobo zamanzi anosawoti, ama-4000 noma ngaphezulu kungaba yindlela engcono
Uhlobo lwe-3. Indlela ophonsa ngayo isondo lokuphotha ufiphaza intambo yebheyili yensimbi, ekhipha umugqa wabalingisi.
4.Ball Amabombo: 4 + 1BB
5.Gear kwesilinganiselo: 5.2: 1
Ukuqondiswa kwe-6.Hand: Ukushintshwa Kokuma Ngezandla
Ukudoba okushibhile kokudoba ukuphotha itolitji yokudoba kwe-AR ukudonsa amanzi anosawoti
I-DW Spinning reel fishing used reels yokudoba ukuthengisa isondo lokudoba
Isilinganiselo seGear: 6.7: 1
Isitolo esidayisa yonke impahla 5.2: 1 AR Spinning reel fishing reels reels salt salt reel full fishing fishing
1.Fishing Indlela: Jikelele Ukudoba Bait Ekubunjweni
Isilinganiselo seGear: 5.2 / 1
Ama-FBE Reels reels reels okudoba amanzi anosawoti ajikelezayo
Isilinganiselo seGear: 4.7: 1 / 5.0: 1
123456 Okulandelayo> >> Ikhasi 1/43